Posted by လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် at 00:40
မြသွေး ရောင် ခန်းစီးစနဲ့
အစိမ်းရောင် လွင်ပြင်ကျယ်ရဲ့ အလယ်မှာ
ငါ့ရင်ထဲကိုကဗျာကိုချစ်တဲ့ ဆူးသစ် တစ်ချောင်းတော့ စူးဝင်နေပြီ
ချစ်ခြင်းရဲ့ အတွေးစလေး တွေနဲ့
မနေ့က မိုးငွေ့ ရနံ့နဲ့
မဒမ် ရယ်လို့ တခါတရံငါ့အခေါ်မှာနေပျော်ပါရဲ့လား
သူဂျီးမရှိလို့ရွာဆူဆိုသလို နင်မရှိရင် ငါ့နှလုံးသားကပွတ်ပွတ်ဆူသွားနိုင်တယ်
အို A အို Hပါတော့လို့ အိပ်ယာ ပေါ်ဝယ်ကငါချော့သိပ့်ပါ့မယ်
နှင်းဆီတခင်းမှာ ပန်းတခြင်းတော့ မင်းအတွက်လက်ဆောင်ယူလာပေးခဲ့တယ်
ဘ၀အတွက် ချစ်စံအိမ် လှလှတစ်လုံးတော့ မောင် ဆောက်ပေးပါ့မယ်
အိမ်လေးထဲမှာ မင်းကြိုက်တဲ့ အရောင်အသွေးတွေနဲ့ ရောင်စုံအခန်း လေးတွေဖွဲ့ပေးထားမယ်
မြစ် မင်းဧရာ ကိုမှီခိုပြီး ငါတို့တွေ လယ်သမားဘ၀နဲ့လဲ ဘ၀ကိုဖြတ်ကျော်ရဲတယ်
အိမ်ရှင်မတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မင်းပါးပြင်က သနပ်ခါး
ဘ၀ရဲ့အမောနဲ့ အိမ်လွမ်းစိတ် တွေ ပြေပျောက်စေခဲ့တယ်
ဧပရယ်ရဲ့ ဖုန်နံသင်းသင်းကို နှစ်ယောက်အတူ ရှူရှိုက်းရင်း
ဂျွန်မိုးရဲ့ မိုးညချမ်း တွေအောက် ငါတို့တူတူပျော်ကြတာပေါ့
စနိုးရဲ့ ကျီစယ်မှု့ကြောင့် အေးစက်တဲ့မင်းလက်နှစ်ဘက်ကို
ရင်ဆူး စေမယ့်ဆူးတစ်ချောင်းက မင်းအချစ်ဆူးဆိုရင်
မြတ်နိုး စွာ နှလုံးဒိုင်ယာရီထဲ ရေးမှတ်
အိပ်မက်ရဲ့ အဖြူရောင် နတ်သမီး တပါးပေါ့
စိုက်ထားတဲ့ချဉ်ပေါင်ခြံ လေးကနေငေးရတာ အရသာတမျိုးပါလားနော်
ငါမင်းဘ၀လေးကို နေမင်းရဲ့ဇွဲမာန်လို ထွန်းလင်းစေပါ့မယ်
မင်းနဲ့ဝေးတုန်းက ဒီမြို့လေးဟာ လွမ်းပိုင်ရှင် ငါ့အတွက် အလွမ်းမြို့လေး
ဘ၀ရဲ့ အိုအေစစ် လေးပေါ့
အသဲလေးတွေနဲ့ဆောက်ထားတဲ့ ဒို့အိမ် လေးဘေးမှာ
၀သုန်မိုးနဲ့ ပျိုးထားတဲ့ ပန်းလှလှလေးတွေစိုက်မယ်
ဆြာတွတ်ရဲ့ ကာတွန်းတွေလဲဖတ်ကြရင်း နေညိုရီအချိန်တိုင်းအတူရီမောကြတာပေါ့
မင်းမုန်းတဲ့သူ လောကမှာမရှိအောင် မင်းနှလုံးသားကရိုးသားလွန်းတဲ့
ဒါကြောင့် အရာအားလုံးပြီးပြည့်စုံတဲ့ ဘ၀တစ်ခု၏ရာဇ၀င်တည်ထောင်ပြီး
2028ချစ်စံအိမ်သစ်မှာ ထရီဆာဆိုတဲ့ အိမ်နီးချင်းလေးနှင့်အတူ
မှတ်ချက်(သို့မဟုတ်)တောင်ပန်ခြင်း ။ ။ကျွန်တော် လေးစားအားကျသော ဘလော့ဂါ အများကြီးကျန်သေးပေမယ့် ကဗျာထဲမှာ နာမည်ပါအောင်မစပ်တတ်သော ကျွန်တော့်အား နားလည်းပေးပါရန်နှင့် နာမည်များကို ခွင့်ပြုချက်မယူပဲ ယူသုံးမိသောကြောင့် တောင်းပန်အပ်ပါသည် ။
ဟ ဟ လွင်ပြင်က အတွေးတွေ သိပ်...ထက်နေပါလားနော်။ တကယ်ပဲ။ တွေးလည်း တွေးတတ်ပါ့ဗျာ။ ဘလော့ဂါပီသပါပေတယ်။ ဖတ်လို့အရမ်းကောင်းတယ်။
လွင်ပြင်ရေ ဒုတိယမြှောက်မန့်သွားတာက အလွမ်းပေါ့။
တကယ် တော်ထှာ။ လက်ရာ ထက်ပါဘိ။
17 September 2012 at 00:56
17 September 2012 at 01:13
ဒါဆို ဟောဒီ ကမ္ဘာ လွင်ပြင် မှာ
စစ်ပွဲဆိုတာ လှိုင်းငယ် လေးသာသာတောင်
တိုက်စစ်တစ်ခုဆင်လာမှတော့ ခံစစ် မှာ မကျရှုံး
ကိုင်း..ဒီကဗျာ အလံဖြူကို ဘယ်သူ ယူပြီး
(မှတ်ချက်။ ။ ဂျက်ကို အားကိုးပါတယ်နော်..:P)
ရေးတက်လိုက်တာနော်.. ကောင်းလိုက်တဲ့ အိုင်ဒီယာ... နာမည်လေးတွေနဲ့ စီကာပတ်ကုံးရေးထားတာ...လေးစားပါတယ်လွင်ပြင်..
17 September 2012 at 05:42
အရမ်းဖတ်လို့ ကောင်း၏..း)
အရမ်းကြိုက်တယ် စပ်လည်းစပ်တတ်ပါ့ :D
အကိုရေ ကဗျာလေးကို အလုပ်တွေမအားတဲ့ကြားထဲ ကနေ အပြေးလေးလာဖတ်သွားပါတယ်...အမြဲတမ်း မရောက်ဖြစ်တာ ခွင့်လွတ်ပါ...ဘလော့ဂါ အားလုံးကို အရမ်းလေးစားပါတယ်...အကိုနှင့်အမကြီး ထာဝရပျော်ရွှင်ခြင်းတွေဖြင့်ပြည့်စုံပါစေ...
အရမ်း အရမ်း ကြိုက်
အိုင်ဒီယာလေး အရမ်း အရမ်း မိုက်
နောက်တခါ မီးနံမယ်ပါအောင် ရေးပေးပါနော်။
ချစ်စကား ကြိုက်စကား သွားပြောလိုက်ပုံများးးး
~ Ko Ki ~
ကဗျာထဲမှာ ခန်းစီးစလေးတစ်စအဖြစ် ရေးဖော်တွေနဲ့ အတူ ပါဝင်ခွင့်ရတာ ၀မ်းသာမိရပါတယ်။ လင့်ခ်တွေနဲ့တကွ အားစိုက်ထုတ် ရေးထားတာကို မချီးမွမ်းပဲ မနေနိုင်ပါဘူး။ ဆက်လက်ပြီး ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာဖြင့် ကဗျာများကို ထုဆစ်နိုင်ပါစေလို့..။
18 September 2012 at 03:29
မိုက်လိုက်ထှာ...။ အစိုးမရလို့လားမသိ.. ကျွန်တော့် ဖဘကိုတော့ သူခိုးမသွားတယ်.။ ဆိုးပ...။
ကဗျာဆရာလို့ မပြောရဘူး တော်လိုက်တာ စုံစေ့နေတာပဲး) ဘုန်းဘုန်းတောက်ပြီး 'တင့်' ဆိုတာ တီတင့်မဟုတ်လား ဟိဟိ .... ဇွတ် :P
ကဗျာထဲမှာ လူတွေစုံအောင် စပ်တတ်လိုက်တာ။ တော်လိုက်တာနော်.။
လာလည်သွားတာ ကျေးဇူးနော်။ အစ်မ ခရီးတွေလွန်နေလို့ ပြန်နှုတ်ဆက်ဖို့ နောက်ကျသွားတယ်။
ချဉ်ပေါင်ခြံလေးကနေ ငေးတဲ့အပုဒ်ရောက်တော့ တကယ် ငေးသွားတယ်ကွာာ
ရေးတတ်လိုက်ထှာာာာ ညဏ်တကွယ်ရွှင်သကိုးး)
ကဗျာလေးကို ဖတ်ရင်း ကဗျာဆရာရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ် ထားမှုကို မြင်နိုင်တယ်... တို့ အစ်ကို ကဗျာရေးတာကတော့ တကယ်တော်တယ်...
ဟာ ဘလော့နာမည်လေးတွေကို ပေါင်းစပ်ထားတာ
မိုက်လှချည်လား အရေးအသားလေးတွေက အတုယူစရာကောင်းလိုက်တာ ကိုကိုလွင်ပြင်လေးက
တော်လိုက်တာ အစ်ကို ... သမီးနာမည်လဲ ကဗျာထဲမှာပါတယ်... ဘလော့ဂါစီနီယာတွေကြားထဲမှာ မှတ်မှတ်ရရ ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူး.. ;))
အမယ်လေး .... ရေးတတ်လိုက်တာ ...
မချီးကျူးဘဲကို မနေနိုင်ဘူး ...
ရအောင် ဖမ်းယူစပ်ဆိုသွားလို့ အံ့သြမိတယ်ဗျာ....
ကိုဘုန်းကြွယ် ညာတာလွဲလို့း)။
ဟား ဟား ဟား အရမ်း သဘောကျတယ်။ တော်လိုက်တဲ့ အစ်ကိုလွင်ပြင်။ အရမ်းကြိုက်တယ် အစ်ကိုရေ။ :D
ဝါးးးးးး တစ်ကယ်တော်တဲ့အကို.... ကျေးဇူးပါလို့..အကိုရေ..အားကျလိုက်တာ နာမည်တွေ စုံလို့ပဲ...:)))
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုလွင်ပြင်။ အတွေးကိုသဘောကျသဗျာ။ ကဗျာရေးသူဆိုတာအဲဒီလိုအတွေးလေးတွေဆန်းသစ်နေတာပိုကောင်းတယ်ဗျ။ ကိုလွင်ပြင်တော်တော်ကိုအားစိုက်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။လေးစားပါတယ်။ကဗျာလေးကိုလည်းကြိုက်တယ်။
22 September 2012 at 05:19
အရမ်းကောင်းတဲ့ ကဗျာလေးကို ခံစားအားပေးသွားပါတယ်...
ကဗျာလေးထဲမှာ ပါဝင်ခွင့် ရတဲ့အတွက် အရမ်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
EI EI NYEIN said...
ညီမလေးရဲ့ နာမည်လဲ ပါလို့ ကျေးဇူးနော်။
Thank you for the good writeup. It іn fact waѕ a
аmusement acсount it. Loоk advаnced tо moгe added agreeable from you!
Also νisіt my website: payday loans
မြင့်မြတ်လှတဲ့ အမျိုးသမီးတိုင်းစိတ်ထားနှင့် ချစ်ခြ...